Daafaca Barcelona ee Samuel Umtiti oo hoos u dhigay u dhaqaaqista koox weyn oo ka dheesha Premier League – Gool FM
Haaruun September 10, 2019
(Barcelona) 10 Sebt 2019. Daafaca kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti ayaa la soo warinayaa inuu qiray inuusan qorsheynaynin inuu u dhaqaaqo mustaqbalka Naadiga ka dheesha horyaalka Ingiriiska ee Arsenal.
Kaddib markii uu lumiyey booskiisa safka hore ee garoonka Camp Nou, Umtiti ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono horyaalka Premier League intii lagu guda jiray suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Wadahadallada ayaa sii socday oo ku aaddan imaatinka kooda Arsenal, qeyb ahaan waxaa sabab u ahaa in uu waqti la qaato ninka ay isku Waddanka yihiin ee reer France, Alexandre Lacazette ka hor kal ciyaareedka cusub.
Si kastaba ha noqotee, kaddib markii Lacazette uu ku sheegay warbaahinta xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka inuu sugayo Umtiti si uu ugu soo biiro garoonka Emirates, Wiilka Barca ayaa ku qoslay soo jeedinta ah inuu si dhaqso ah ugu dhaqaaqi doono Waqooyiga Magaalada London.
Inkastoo uusan haysan waqti ku filan oo uu ciyaaro, Umtiti waxa uu dhowaan sheegay inuu ku faraxsan yahay nolosha kooxda haysata horyaalka La Liga.
"Waxaan u maleynayaa in albaabada Real Madrid ay marwalba u furnaan doonaan laacibka…” – Ramos
Soomaaliya vs Zimbabwe: Xogta kulanka adag ee Galabta & Rajada uu xulkeennu ka qabo inuu markale guul gaaro